Madaxweyne kuxigeenka Yemen " xaaladda madaxweyne Saalax waa halis" – SBC
Madaxweyne kuxigeenka Yemen " xaaladda madaxweyne Saalax waa halis"
Sanca:-madaxweyne kuxigeenka dalka Yemen Cabdi Rabbi Mansuur Haadi, ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweyne saalax ay tahay mid khatar ah uuna garanayn xilliga uu soo laaban doono.
Arrintaasi ayaa ku soo beegmaysa xilli ilo milatari oo Yemen ah ay tilmaamayaan in inkabdan 26 askari iyo 17 katisan koox hubaysan oo ku xiran Al-qaacidda ay ku dhinteen dagaal culus oo ka socda meel u dhow magaalada Zanjibaar ee warbixinadu ay sheegayaan in ay gacanta ku hayaan kooxo hubaysan oo Al-qaacidda xiriir la leh.
Madaxweyne kuxigeenka oo wareysi siinayey shabakada CNN ayaa sheegay in uu arkay madaxweyne saalax weerarkii lagu qaaday madaxtooyada kadib, islamrkaana madaxweynuhu la il daran yahay dhaawac ka soo gaaray wajiga iyo dhudhunka iyo jirka sare.
Mr Haadi ayaa cadeeyey in uusan garanayn marka uu soo noqonayo madaxweyne Saalax , marka laga reebo dhaqaatiirta la socoto xaaladdiisa caafimaad, wuxuuna raaciyey waxa ay noqon kartaa maalmo gudahood , toddobaadyo ama bilo, waa qaraar ay qaadanayaan dhaqaatiirta ayuu raaciyey.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Yemen Abuu Bakar Al-qirbi ayaa sheegay in uu fariin kawado madaxweynaha oo ku aadan wadahadal lala galo mucaaradka si loo fuliyo waan waantii Khaliijka si xal looga gaaro rabshadaha dalka Yemen.
Al-qirbi ayaa tilmaamay in xukuumadiisu ay dood ka yeelatay waan waantii khaliijka islamrkaana madaxweynuhu uu ku baaqay in wadahadal la lagalo mucaaradka si heshiis looga gaaro fulinta qodobada waan waanta khaalijka uu soo jeediye.
Al-qirbi ayaa ku tilmaamay xaaladda caafimaad ee madaxweyne Saalax in ay tahay mid wanaagsan islamarkaana uu ka soo kabanayo dhaawicii ka soo gaaray duqeyntii loo geystay masjid ku yaal madaxtooyada xilli uu salaada jimcaha isu diyaarinayey.